Manohitra Ireo Volavolan-dalàna Enti-Manohitra Ny Piraty Ny Fikambanambe Eran-tany Ao Amin’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Janoary 2012 12:53 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, Català, Dansk, عربي, 한국어, Português, Svenska, 繁體中文, 简体中文, English
Araka ny nosoratan'ny Tale Mpanatanteraky ny Global Voices, Ivan Sigal, dia “misy ireo vondron'orinasa matanjaka sy herin'ny governemanta izay te-hahita ny famerana ny fivelarana sy ny fahalalahan'ny vohikala.” Samy manery ireo vohikala hanivana ny vaovao misy zon'ny mpamorona avokoa ny lalàna Stop Online Piracy Act (SOPA) sy ny Protect-IP Act (PIPA), ary mety, araka ny nosoratan'i Sigal , “hitarika takaitra goavana amin'ny asan'ireo mafàna fo dizitaly miaina eo ambany fitondrana tsy refesimandidy, hatramin'ny famerana ireo fahalalahana miteny fototra maneran-tany.”
Koa satria manana fahafahana hiantefa any amin'ireo mpampiasa Aterineto eran-tany ireo volavolan-dalàna ireo, niombon-kery tamin'ny Amerikana ny Fianakaviam-be eran-tany ho fanoherana. Avy amin'ny vondrona dizitaly Aleamana Netzpolitik mankany amin'ny Open Media Canada ka hatrany amin'ireo mpitoraka bilaogy tsotra sy ireo mpampiasa media sosialy, iray ihany ny hevitra: Ajanony ireo volavolan-dalàna ireo.
Lasa mainty mba hanoherana ny #SOPA ny vohikala Frantsay https://linuxfr.org
Maro ireo vohikala nisafidy ny haneho ny fanoherany amin'ny fanamaintisany ny vohikalany, na iray manontolo io na amina pejy manelanelana. Danica Radovanovic (@DanicaR), manoratra ho an'ilay bilaogin'ny tambajotra Aostraliana DejanSEO, miresaka mikasika ny fanapahan-kevitry ny Wikipedia hiombona amin'io fanamaintsisana io, fanapaha-kevitra izay nisy fiantraikany tamin'ny fianakaviambe eran-tany mpamaky azy:
Nandritra ireo 72 ora lasa, mihoatra ny 1800 ireo Wikipediana niombon-kery hiresaka momba ireo tolo-kevitra amin'ny hetsika mety hataon'ny fikambanambe hanoherana ny SOPA sy ny PIPA. Ity aloha hatreto no fandraisana anjara faran-tapony anatina ady hevitry ny fikambanambe hita tao amin'ny Wikipedia, izay maneho ny haavon'ny ahiahy tsapan'ireo Wikipediana momba ity volavolan-dalàna ity. Manohana ny hetsika itambarambe ny ankamaroan'ireo mpandray anjara ho setrin'ireo volavolan-dalàna roa ireo. Amin'ireo tolo-kevitra avy amin'ireo Wikipediana, ireo izay miafara amin'ny fandokoana ho mainty ny Wikipedia amin'ny teny Anglisy, miaraka amin'ireo fanamaintisana any amin'ireo vohikala hafa izay manohitra ny SOPA sy ny PIPA, no nahazo ny fanohanana matanjaka indrindra.
Niombon-kery tamin'ireo fikambanana mpiara-miasa aminy any Amerika ny fikambanana Frantsay iray, La Quadrature du Net amin'ny fandokoana ho mainty ny vohikalany, hita eto amin'ity sary manaraka ity:
Ny fanamaintisan'ny Antoko Piraty any Katalaona ho firaisankina
Ireo Antokonà Piraty dia isan'reo mpanohitra tena mirongatra indrindra manoloana ireo volavolan-dalàna manohitra ny fijirihana ireo. Any Espana, Katalaona, Soisa, Arzantina, Kanada, ary Soeda (ankoatra ireo maro hafa, raha tsy izy rehetra mihitsy), maro ireo antoko piraty tao an-toerana no niombon-kery tamin'ny fandokoana ho mainty ny vohikalany.
Mainty ihany koa ny Chaos Computer Club sy ny Antoko Maitso any Jermania , sy ilay fikambanana iraisam-pirenena Reporters Without Borders nandritra ny 18 Janoary. Ity farany izay nanazava ny antony nanapahany hevitra, manoratra hoe:
Nanapa-kevitra ny hanakatona ny vohikalanay amin'ny Teny Anglisy mandritra ny 24 ora izahay mba ho famantarana ny famoretana ara-tsaina mety hiparitaka manerana ny Aterineto araka ny efa fantatsika raha sanatria ka lany ny SOPA sy ny PIPA. Tsy ho voaisa ireo mpampiasa aterineto tsy manan-tsiny hiaran'ireo volavolan-dalàna ireo amin'ny karazana fanimbazimbana ny rindram-pahalalàna, amin'ny fanerena ireo vohikala hanakana ny fidirana amin'ireo vohikala hafa izay ahiahiana handika ny zon'ny mpamorona izay tsy dia voazava tsara ny dikany.
Raha hijery ny sarin'ireo vohikala hafa nanao fanamaintisana tanatin'ilay fanoherana, tsidiho ny tahirin-tsarin'i Netzpolitik momba ny fanamaintisana SOPA.
Fandikana ny lanjan'ny hafanam-po
Any amin'ireo firenena sasany, nandray an-tànana izany ho fanabeazana ny vondrom-piarahamonin-dry zareo momba ny lanjan'ny fanoherana ny SOPA sy PIPA ireo mpitoraka bilaogy sasany. Nanoratra fanazavàna momba ny antony tokony hitandreman'ireo olom-pirenena Libane amin'ireo volavolan-dalàna ireo ny Libaney iray mpitoraka bilaogy, Mireille Raad. Manoratra izy:
Ny maha-libaney, tsy manakana anao tsy ho mpampiasa aterineto – hiantraika amin'ny aterineto amin'ny fomba ratsy ny SOPA ary voataritarika anatin'izany ireo vohikala ivelan'i Etazonia, ary dia ny anao izany…
…Tokony hitandrina sy ho tezitra ianao, satria, na tianao izany na tsia, tsy misy aterineto eny amin'ny habakabaka, vita avy amin'ireo orinasa izay misy any amin'ireo firenena izany ary tsy maintsy manaraka ny lalàna ao an-toerana na dia “maneran-tany” aza ny aterineto. Izany no mahatonga ny olona eran-tany miasa loha amin'ny lalàna SOPA – ary na mahatsapa tena ho tsy ampy hery aza ianao, tokony mbola hiasa loha ihany ary hannao hetsika anaty aterineto – satria namboarina hitovy daholo ny olona rehetra ao anatin'ny tontolon'ny aterineto ary mitovy ihany koa fiakon'ny hetsika ataony
Anatina lahatsoratra teo aloha, nametaka anarana ireo volavolan-dalàna manohitra ny piraty ho “Rindrimben'i Shinamerika”, i CK Hung, Taiwanais mafana fo amin'ny fahalalahan'ny fampahalalam-baovao . Anatina sarisary [zh], maneho ny heviny ilay mpitoraka bilaogy:
Edit: Misy dikanteny Anglisy ihany koa ilay sary:
Manoratra ihany koa izy:
Faly ireo eo amin'ny fahefana dia faly amin'ny “fiarovana ny rindram-pahalalàna” na ny “tsy fanekena ny fananahana”, “fiaraha-monina mirindra” toy ny jono izay tsy afaka hameno velively ny vava ho fandemena ireo olom-pirenena hanohana ny politikany sy ireo hetsika ara-dalàna izay hanamafy ny fanaraha-maso ny vohikala (oh, fisafidiannaa ireo fitaovana mba hanamora ny fanaraha-maso) . Ary avy eo avy amin'ny alàlan'ireo lalàna sy politika ireo no hahafahany manamafy ny famoretany ny fampahalalam-baovaon'ny olom-pirenena. Faly ireo mitazona ny fahefana fa aloka no hany mba hitan'ireo olom-pirenena, nefa tsy fantany hoe ny lalana mankany amin'ilay aloka dia fahasimbana amin'ny andaniny roa izay manohintohina ny fiaraha-monina demokratika sy malalaka. Tsy olana na iza na iza no ho mpitondra faran-tampony any amin'ny farany– ny Microsoft, ny Apple, ny Antoko Komionista, ny Antoko Demokratika na koa ny Antoko Repoblikana– ny ankamaroan'ireo iharan'ny tsy eran'ny ainy dia ny vahoaka maro an'isa.
Ary Taiwan no tany fanandramana tonga dia eo anelanelan'ny fisarahan'ireo hery mpamoritra roa goavana ireo.
Manazava ny antony tsy itiavany ireo volavolan-dalàna ireo ny Venezoelana mpiara-miasa amin'ny Global Voices, Marianne Diaz [es]:
…Fa izao, tsy i Amerika no izao tontolo izao, ary manana ny fetran'ny tany ireo lalàna mikasika ny rindram-pahalalana sady miovaova isaky ny firenena. Ohatra, any Venezoela, miditra ho fananam-bahoaka ny asa soratra enim-polo taona aorian'ny fahafatesan'ny mpanoratra. Na eo aza izany, amin'ny fampiharana ny SOPA sy ny PIPA, te-hanery ahy, anao sy ny Siberiana hafa mba hiforitra hanaiky an-tery eo ambanin'izay tsy mifanaraka akory amin'ny lalàna [ao an-toerana] i Etazonia.
Ao amin'ny Twitter, resadresaka sahala amin'izay no mitranga. Avy any amin'ny Royame Uni, manoratra i @GokhanKaratay :
Tena manantena aho fa tsy hivoaka mihoatra ny Senat ireo volavolan-dalàna #SOPA sy #PIPA. Ilaina ny lalàna manohitra ny piraty, nefa tsy izany no fomba tokony hitondrana azy
Manondro ny fandraisan'anjaran'ny Cuevana, sehatra fampisehoana lahatsary any Arzantina, i @Gaby_xoa:
Miombon-kevitra amin'ny fanamaintisana #ANTISOPA [manohitra ny volavolan-dalàna izay] mametra ny fahalalahana miteny ny #Cuevana!
Ny zavatra azonao atao hanakanana ny SOPA sy ny PIPA
Na dia voafetra aza fahafahan'ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena mikitika ny volavolan-dalàna Amerikana iray, heverina fa tena manampy ireo mafana fo any Etazonia ny firahalahiana hita anatin'ny fanoherana ireo volavolan-dalàna roa ireo. Eo andanin'ireo ohatra voalaza tetsy aloha, nahita fomba maro mampiseho talenta maro ihany koa ireo mpitoraka bilaogy mba hanaovana izany, tahaka ny fanovànana Twibbon manohitra ny SOPA na manohitra ny PIPA na koa ny fandokoana mainty ny bilaoginy WordPress. Ny fiadiana ho an'ny hoavy dia mandrisika ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena hanao sonia fanangonana sonia hatolotra ny Departemantam-panjakana. Nefa ny fanoratana fotsiny ny fidiran'ireo volavolan-dalàna roa ireo dia efa ampy.
Ireo olom-pirenena Amerikana, amin'ny lafiny iray hafa, dia manana safidy marobe. Ireto misy santionany vitsivitsy amin'ny fomba hanatanterahana izany:
Manana fanangonan-tsonia ihany koa ny Electronic Frontier miaraka aminà toro-làlana hihaonana amin'ireo solom-bavam-bahoaka na senatora.
Mampiantrano fampielezan-kevitra amin'ny fanoràtana ny tetikasa Stop American Censorship an'ny tetikasa Fight for the Future, na Miady ho an'ny hoavy.
Manana fampielezan-kevitra iray ny Free Press mba hanangonana sonia mba hitateran'ireo fahitalavitra ny mahakasika ireo volavolan-dalàna ireo.